Ndụmọdụ 10 Maka ingchekwa weebụsaịtị Weebụ Na-eme Ka Ndị Na-azụ Ihe na Ndị Na-ere Ọsọ Ga-ekere òkè | Martech Zone
Zụta ụlọ, ụlọ, ma ọ bụ ogige bụ ego dị mkpa… na-eme naanị otu ugboro na ndụ. Mkpebi ịzụrụ ụlọ na-akpali ọtụtụ mmetụta na-emegiderịta onwe ha - yabụ enwere ọtụtụ ihe ọ dị mkpa ka a tụlee mgbe ị na-emepụta ezigbo ụlọ ahịa nke na enyere ha aka njem njem.
Ọrụ gị, dịka onye na-elekọta ụlọ ma ọ bụ onye na-ere ụlọ ala, bụ ịghọta mmetụta uche mgbe ị na-eduzi ha gaa n'echiche ziri ezi na nke ị maara nke ọma. Lee ihe isii ị ga-eme hazie ma bulie webụsaịtị gị nke ahụ ga - enyere gị aka ịghọ onye isi dijitalụ na azụmaahịa ụlọ.
Ndụmọdụ 1: Itinye Esịtidem Search na nzacha ikike
Mgbe olile anya gị na-azụ ahịa maka ịre ụlọ, ha na-ebu n'uche mgbe niile. Ozugbo onye ọbịa ahụ bịarutere na saịtị gị, gosi ha na ị nwere ike ịdabere na mkpa ha ma gosipụta ihe ndị kwekọrọ na ihe ha na-achọ.
Gụnye itinye ọkwa doro anya nke nyocha ọchụchọ dị n'ime yana ihe nzacha ga-enye gị ohere ịkekọrịta ụlọ gị. Ọ bụrụ na ihe omume gị gbadoro anya na ịzụrụ ụlọ, dịka ọmụmaatụ, gụnyere ọnụahịa, ụdị ihe owuwu ahụ, eserese square, nha ọtụtụ, ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ ihi ụra, ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ ịwụ ahụ, na njirimara ndị ọzọ (ọkụ, ọdọ mmiri, ụgbọala, wdg).
Ọ bụrụ na ngwongwo gị gụnyere ọtụtụ mpaghara, ụdị ala, na ụdị nke usoro, ị nwere ike ịchọrọ ịgbasa ikike nzacha ka ndị na-azụ gị wee belata nyocha ha na mpaghara ụfọdụ na njirimara ndị ọzọ nke ụlọ ahụ.
Ndụmọdụ 2: Nyefee peeji nke ọ bụla
Nhọrọ nke agbata obi dị mkpa ma a bịa n'ịzụrụ ala. Nyefee otu peeji na mpaghara ọ bụla, agbata obi, ma ọ bụ mpaghara ụlọ akwụkwọ ebe ị na-ere ọre ma ọ bụ mgbazinye nke ezigbo ụlọ. Tinye ozi bara uru ma dị mkpa iji mara maka mpaghara ahụ. Ma tinye map na-egosiputa nke ọ bụla na njirimara gị yana ebe ndị ọzọ nwere mmasị:
Ọrụ ndị dị nso (ụlọ akwụkwọ, ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụka)
Facilitieslọ ọrụ ebe a na-atụrụ ndụ (ogige, ọdọ mmiri, ebe a na-egwu golf)
Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya dị nso
Na-ekwukarị etu esi ebi ndụ na mpaghara. Ọ bụ ebe dị jụụ ma dịkwa mma, nke dị mma maka ezinụlọ na-eto eto, ma ọ bụ kama agbata obi na-ewu ewu na nso ụlọ nri kachasị mma, ebe a na-eme ihe nkiri, na ụlọ nzukọ ngosi? Na mgbakwunye na ịgwa ndị ọbịa gị banyere ebe ha na-agaghị ama, peeji ndị a ga-eme ka ịkọwapụta ibe gị nke ọma maka nchọta a kapịrị ọnụ.
Ndụmọdụ 3: Nye nkọwapụta nke ọ bụla
Onye na-azụ ihe n'ịntanetị taa achọghị ịkpọ onye na-ere ụlọ ma ọ bụ onye na-ere ahịa ka ị nweta ozi dị mkpa. Dị njikere na peeji nke na-akọwapụta ihe onwunwe gị ma ọ bụ nkeji nwere ozi ndị a:
Ọnụ ọgụgụ ụlọ, gụnyere ọnụ ụlọ ihi ụra na ime ụlọ ịwụ
Mpaghara square, ebe obibi, na mpaghara nke ime ụlọ (metric and imperial)
Eletriki, kpo oku, na mmiri usoro
N'èzí ebe obibi (veranda, decks, wdg)
A na-enye ebe na ọrụ ndị a na-ahụkarị (n'ihe banyere condominiums)
Ngwongwo ma ọ bụ ngwa ndị a ga-etinye
Afọ nke owuwu ma ọ bụ ndozi emere oge
Ohere maka ohuru ohuru (dika okpuru ulo)
Na, n'ezie, tinye foto dị ịtụnanya nke akụkụ ọ bụla nke ihe onwunwe ahụ, n'èzí nke ụlọ site n'akụkụ ọ bụla, foto nke ụlọ ọ bụla, na ọbụna ihe nkiri nke ihe onwunwe ahụ. Ọ bụrụ na foto ruru otu puku okwu, cheedị echiche mmetụta dị ukwuu ọtụtụ foto mara mma ga-enwe! Don'tkwesighi ịkpọ onye na-ese foto smartphones ọgbara ọhụrụ nwere ikike ịtụnanya ugbu a. Iji nkuku ziri ezi na ọkụ, ịnwere ike ịnwe foto ndị kachasị mma na-eweghara ihe niile gbasara akụ ahụ.
Ndụmọdụ 4: Nye ụzọ iji kesaa ngwongwo ahụ
Ndị na-azụ ahịa ala taa anaghị azụ ahịa naanị ha, yabụ nye ha ọtụtụ nhọrọ maka ịkekọrịta site na email, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ozi ederede. Nwedịrị ike ịchọrọ ịnye ụdị "Zigara enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe" nke na-ejide adreesị ozi-e ha na ndepụta nke ndị nwere mmasị - kpachara anya ịtọ atụmanya na ị ga-akpọtụrụ ha ma ọ bụ na ị gaghị.
Hụkwa na enwere ike ijikọ njikọ ọ bụla ka ị nwee ike ịghọta nke ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta na-akwalite mbak na nleta na ihe onwunwe gị.
Ndụmọdụ 5: Mee ịkpọtụrụ gị dị mfe, nkeonwe, na nrụgide-na-akwụghị ụgwọ
Ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa na-enwekarị obi abụọ ịbịakwute ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa, ị ga-achọ ime ka udo dịrị ha. Mgbe ị gụnyere aha na nọmba ekwentị nke onye ọrụ gị, gbaa mbọ tinye foto yana ozi ahaziri nke na ajụjụ ha agaghị enwe nrụgide.
Gbalia itinye akwukwo na ibe akwukwo obula tinyere ozi ihe omuma na ala zoro ezo. N'ụzọ dị otú a, mgbe ị ruru ha aka, ị nwere ike nyocha ihe onwunwe ahụ ma kwadebe maka mkparịta ụka ahụ!
Ndụmọdụ 6: Capture Analytics na soro onye ọbịa gị Data
Ma ị pere mpe ma ọ bụ na ị na-egwuri egwu n'ọhịa, ị ga-erite uru site n'ịchịkọta ozi gbasara ndị ọbịa gị. Akụkụ a nke usoro ịzụ ahịa gị nwere ike ịdị mkpa dị iche, dabere na mmefu ego na ọrụ mmadụ ị nwere. Ọtụtụ ngwaọrụ nchịkwa na-eduga nwere ike ịba uru n'oge a.
Leaddị Capture msdị
Bido nakọta ozi gbasara ndị ọbịa gị site na ime ka ha kwenye na ịnye adreesị ozi-e ha ga-aba uru maka ọchụchọ ụlọ ha. Ndị a bụ ihe atụ ole na ole nke atụmatụ dị mma maka ịchọta ozi atụmanya na ụlọ ọrụ ụlọ:
Open ụlọ na onwe njegharị ohere
Asọmpi ma ọ bụ nkwalite
Ndepụta VIP maka ezigbo ala na-enye (dịka ọnụahịa kwụsịrị)
Ndụmọdụ ụlọ na mpaghara maka ndụmọdụ ụlọ
Ọkwa ụlọ akụ ọhụụ
Ọnọdụ gị iche dị ka bọtịnụ popups, slide-ins, ma ọ bụ tinye ha n'okpuru ụkwụ nke ibe ọ bụla.
N'ọnọdụ ọ bụla, lekwasị anya na ebumnuche gị bụ isi: ịchịkọta ozi gbasara ndị ahịa. Zere asọmpi na-enweghị isi ma ọ bụ nkwalite nke na-enweghị ngwaahịa ị na-ere, ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịgba ndị ọbịa na-erughị eru ume ịdebanye aha. Ihe ịma aka ijide ndị na-azụ ahịa mgbe ị na-akpa ókè megide ndị ọbịa na-enweghị mmasị na njirimara gị.
Peeji nke I gha enweta
Ọ bụrụ n’ị na-etinye ego na mgbasa ozi na ịre ahịa, emehiela nke iduzi okporo ụzọ gị niile na peeji nke saịtị gị. Mepụta peeji ọdịda ụfọdụ maka akụ ọ bụla - ma ọ bụ mkpọsa akwụkwọ akụkọ mpaghara, bọọdụ mkpọsa, ma ọ bụ ozi email. Site na ịmepụta na ịhazigharị a ihu ala maka uzo ma obu uzo obula, ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike ịchọpụta ịdị ire ahịa gị, ị nwekwara ike ịhazi ozi ebe ahụ.
Ibe ọdịda ọ bụla kwesịrị inwe naanị otu ihe mgbaru ọsọ. Onye ọrụ nke rutere na ibe a ga-enwerịrị ike ịghọta onyinye gị na obere sekọnd ma chee na ọ na-atọ ụtọ iji mejupụta ụdị yana ozi nkeonwe ya.
Ndị a bụ ụfọdụ ohere dị ukwuu maka ọdịda peeji nke:
Kpọsa ala na ụlọ ọhụrụ
Openbọchị na-emeghe ụlọ ma ọ bụ ntinye akwụkwọ nlegharị anya nkeonwe
Nbudata ntuziaka ịzụta ụlọ
Ajuju ajuju iji nyere aka zuo ulo
Nkwado na-enye gị na ngalaba ụlọ ụfọdụ
Ndụmọdụ 7: Kere maka Ngwaọrụ Mobile Nke mbụ
Ọ bụ ezie na desktọọpụ na-enye ọtụtụ ezigbo ala (ihe ezubere) iji gosipụta ozi mara mma, iwulite ahụmịhe onye ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka nke amachaghị ma dị mfe nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ma ọ na-emepe ihu peeji ọchụchọ nke dị mgbagwoju anya ma ọ bụ a njegharị ihe onwunwe agagharị ebe ndị ọrụ nwere ike isi na mkpịsị aka site na foto nke akụrụngwa, imewe mkpanaka ga-adị oke egwu na mmetụta nke imewe ụlọ ọrụ webụsaịtị gị.
Wepụta oge n'iji saịtị nke aka gị na ekwentị mkpanaaka ma rịọ nzaghachi site n'aka ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị otu saịtị gị dị mfe iji. Ga-achọ ikewapụta mkpanaka ekwentị gị, ọbịbịa ndị ọbịa, yana ụdị data enwetara site na nleta mkpanaka iji hụ na ọ dị mma na onye ọrụ.
Ọ bụrụ n ’ị buru ụzọ chepụta maka mkpanaka, ya ejula gị anya mgbe ị hụrụ n’ ọdịda na nhụta njin ọchụchọ gị na ọnụ ọgụgụ ndị na - azụ ahịa na - abawanye! Ekwentị dị oke mkpa na weebụsaịtị ọ bụla na ụlọ ọrụ ụlọ!
Ndụmọdụ 8: Start A Real Estate Blog
A blog bụ ohere zuru oke iji soro ndị nwere ike ịzụta gị. Kekọrịta akụkọ nkeonwe, ndụmọdụ ụlọ na-azụ, azụmaahịa mpaghara ị masịrị, oghere ụlọ oriri na ọ newụ newụ ọhụrụ, ụlọ akwụkwọ, na ozi ụtụ isi mpaghara… niile na-ewulite ikike gị na mmekọrịta gị na ndị debanyere aha gị. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ị hụtụbeghị ha, blọọgụ na-enye ha ohere ka ha mata gị dịka onye ndu ha nwere ike ịtụkwasị obi n’ime obodo ị na-erere ya.
Na-agbanyeghị ahịa, ọrụ gị dị ka onye ndụmọdụ dị mkpa na mmekọrịta azụmahịa nke ị mepụtara na ndị ahịa gị. Zụta ihe onwunwe bụ ihe dị mkpa, yabụ ikike ụlọ dịka onye na-elekọta ụlọ nke onye ọbịa gị nwere ike ịtụkwasị obi dị oke mkpa.
Idebe blọọgụ bụ ụzọ dị mma iji jigide onye ahịa. Ọ bụrụ na ị na-enye ndụmọdụ gbasara nwe ụlọ, mmezi, ịhazigharị, na ịbawanye uru nke akụ ha - onye na-azụ ahịa ga-eburu gị n'uche ma ọ bụrụ na ha akwagara ma chọọ ire, ma ọ bụ ezinụlọ ha gbanwere ma ha kwesịrị ịkwaga ihe kacha mma.
Isiokwu ndị ị nwere ike iji na blọọgụ gị enweghị njedebe. Lee ihe atụ ole na ole:
Zụta ụlọ (njirisi, nhọrọ, nhọrọ, ego)
Mbughari na imeghari
Mgbanwe na ahịa ụlọ
Usoro ọgwụgwọ (akwụkwọ iwu, nkwa, ntụpọ ezoro ezo)
Inye mkpuchi ụlọ
Mma nke ime
Na-ere ihe onwunwe
Ebe obibi ndị ama ama
Ndụmọdụ oge a (ubi, ndozi, wdg)
Ndụmọdụ 9: Malite Akwụkwọ Akụkọ
Anyị tụlere ụfọdụ echiche ndenye aha dị n'elu maka ụdị njide gị, mana enweghị ike ịlele mkpa nke akwụkwọ akụkọ. Cheedị akwụkwọ akụkọ gị dị ka ụzọ isi kwalite weebụsaịtị gị na onye nwere ike ịzụta gị ma ọ bụ onye ahịa… na-enye ha ndụmọdụ bara uru, mpaghara mpaghara, ma na-aga n'ihu na-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ha. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-azụ ahịa, ha nwere ike mechara chọta ụlọ ha na-achọ. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ahịa, ị ga-anọgide na-enwe mmekọrịta ha na ha mgbe ha dị njikere ire, ị ga-abụ onye ọrụ gị na uche gị!
Akụkụ nke akụkụ: Akwụkwọ ozi ekwesighi ibu ibu! Ebe nrụọrụ weebụ nke oge a nwere ndepụta ntanetị nwere ike ịhazi ya, dezie ya ma bipụta ya na ikpo okwu email na-enweghị mkpa ịmetụ bọtịnụ aka! Gwa ndi otu web imewe gi otu esi etinye RSS n’ime ike email.
Ndụmọdụ 10: Na-akwalite saịtị gị na Akwụkwọ Akụkọ… N’ebe niile!
Gụnye URL saịtị gị na kaadị azụmaahịa ọ bụla, flyer, akwụkwọ, mbinye aka email, akara, na ihe ọ bụla ị na-eme. Ndị na - azụ ahịa taa na - ahụ onwe ha n’anya ma jiri web were mee nchọpụta ma mee mkpebi nzụta. Mgbe ị zutere ndị na-azụ ahịa, ndị na-ere ahịa, ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ, na ndị nwere azụmaahịa mpaghara n’ihu ọha, jụọ ma ị nwere ike ịdebanye aha ha maka akwụkwọ akụkọ gị. O nwere ike iju gị anya site na ọnụ ọgụgụ ndị na-ezigara na mbak nke ọdịnaya gị ga-emepụta mgbe ọnwa ole na ole gachara.
Site na ndụmọdụ ndị a, a kwadebere gị nke ọma iji bulie mmetụta nke ọrụ ịre ụlọ na webụ!
Tags: ezigbo ala na ụlọnjegharị mkpagharịahịa ịre ụlọezigbo ala ọdịda peeji nkeire ala na ụlọezigbo ala na ụlọala ala ụlọala na ụlọimewe saịtị ụlọezigbo ụlọ ahịa